Shirka Madaxda Dowladda iyo M/Goboleedyada oo Maanta furmaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxaa Maanta oo tallaado ah lagu wadaa inuu ka furmo Shirka Madaxda dowladda Federaalka Soomaaliya, kuwa maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir.
Shirka oo ah mid uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo ayaa lagu waday inuu shalay furmo, hayeeshe dib u dhac ayaa ku yimid, hayeeshee gelinka dambe ee Maanta ayuu furmaya, iyado looga hadli doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha doorashooyinka dhacaya Soomaaliya, xili weli muran xoogan uu ka taagan yahay.
Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Madaxweyneyaasha maamul Goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa shalay gaaray Magaalada Dhuusamareeb, iyagoona xalay kulan hordhac u ah Shirka Wadatashiga ah yeeshay.
Ammaanka guud ee Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda maamulka Galmudug ayaa siweyn loo adkeeyay, iyadoona sugida amniga ay iska kaashanayaan laamaha amniga Galmudug iyo kuwa dowladda Federaalka ee halkaas ku sugan, kadib markii xalay halkaas lagu garaacay tirro hoobiyeyaal ah.
Al-shabaab oo weerar madaafiic ku qaaday Dhuusamareeb, xili Farmaajo iyo…
Wararkii ugu dambeeyay Shil naxdin leh oo ka dhacay Puntland